ဆီးချို၊ သွေးချိုရောဂါ၊ ရောဂါအားလုံးတို့အတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ရုံးပတေသီးရဲ့ အံ့ဖွယ်အစွမ်း ၇ မျိုး - Focus Myanmar
ဆီးချို၊ သွေးချိုရောဂါ၊ ရောဂါအားလုံးတို့အတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ရုံးပတေသီးရဲ့ အံ့ဖွယ်အစွမ်း ၇ မျိုး
June 1, 2019 By Myanamr Plus in ကျန်းမာရေး, စမ်းသပ်လေ့လာခြင်း Tags: ရုံးပတေသီး
1. ဆီးချို/သွေးချိုရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်။
ရုံးပတေသီးမှာ အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို လျှော့ချပေးရာမှာ ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အစာထဲမှာပါတဲ့ သကြားဓာတ်ကိုလည်း စုပ်ယူနိုင်စွမ်း မြင့်မားလို့ ဆီးချို သွေးချိုရောဂါတွေအတွက်တော့ အလွန်သင့်တော်တဲ့ ဆေးတစ်ပါးပါ။
2. နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။
နှလုံးရောဂါကို ဖြစ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားစေတဲ့ သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောဓာတ်ပါဝင်မှုကို ရုံးပတေသီးနေ့စဉ်စားပေးခြင်းနဲ့ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ရုန်းပတေသီးမှာ အမျှင်ဓာတ်၊ Pectin ဓာတ်တို့ဟာ နှလုံးရောဂါကို အထူးကာကွယ်ပေးပါတယ်။
3. ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးနိုင်တယ်။
ရုံးပတေသီးမှာ ကယ်လိုရီအလွန်နည်းပါးစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရုံးပတေသီး 100 g ဟာ ကယ်လိုရီ33%ကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်စွမ်းရှိလို့ များများစားလေ ၀ိတ်ကျဖို့အတွက် အခွင့်အလန်း ပိုများလေဖြစ်ပါတယ်။
4. ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြင့်မားစေတယ်။
ရုံးပတေသီး 100 g မှာ ဗီတာမင် C 38% ပါဝင်လို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ကိုယ်ခံစွမ်းအား နည်းရင် နည်းသလို ပြင်ပရောဂါတွေ ၀င်ရောက်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုံးပတေသီးကို နေ့စဉ်စားသင့်ပါတယ်။
5. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအားကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်။
နေ့စဉ်စားပေးရမယ့် ရုံးပတေသီးမှာ Vitamin B9 ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗီတာမင် C လည်းပါဝင်လို့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျှော့ချရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ရုံးပတေသီး ပုံမှန်စားသုံးပေးပါက စိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်ကျန်းမာခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
6. ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် သင့်တော်တယ်။
folic acid နဲ့ Vitamin B9 ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ရုံးပတေးသီးကို ပုံမှန်စားသုံးပေးသင့်သူတွေထဲမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံးပတေသီးဟာ ကလေး မွေးဖွားရ လွယ်ကူစေပြီး စွမ်းအားအသစ်တွေကို ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။
7. ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။
ရုံးပတေသီးဟာ အခြားသစ်သီးများထက် ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အမျှင်ဓာတ်နဲ့ အခြားဆေးဘက်ဝင် အာဟာရဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆဲလ်ပျက်ဆီးမှုကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ၀င်ရောက်လာတဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကိုလည်း မဖြစ်အောင် တိုက်ဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆီးခြို၊ သှေးခြိုရောဂါ၊ ရောဂါအားလုံးတို့အတှကျ အရမျးကောငျးတဲ့ ရုံးပတသေီးရဲ့ အံ့ဖှယျအစှမျး ၇ မြိုး
1. ဆီးခြို/သှေးခြိုရောဂါကို ပြောကျကငျးစနေိုငျတယျ။
ရုံးပတသေီးမှာ အမြှငျဓာတျကွှယျဝစှာပါဝငျလို့ သှေးတှငျး သကွားဓာတျကို လြှော့ခပြေးရာမှာ ထိရောကျမှုရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အစာထဲမှာပါတဲ့ သကွားဓာတျကိုလညျး စုပျယူနိုငျစှမျး မွငျ့မားလို့ ဆီးခြို သှေးခြိုရောဂါတှအေတှကျတော့ အလှနျသငျ့တျောတဲ့ ဆေးတဈပါးပါ။
2. နှလုံးရောဂါကို ကာကှယျပေးနိုငျတယျ။
နှလုံးရောဂါကို ဖွဈနိုငျစှမျးမွငျ့မားစတေဲ့ သှေးတှငျး ကိုလကျစထရောဓာတျပါဝငျမှုကို ရုံးပတသေီးနစေ့ဉျစားပေးခွငျးနဲ့ လြှော့ခနြိုငျပါတယျ။ ရုနျးပတသေီးမှာ အမြှငျဓာတျ၊ Pectin ဓာတျတို့ဟာ နှလုံးရောဂါကို အထူးကာကှယျပေးပါတယျ။
3. ကိုယျအလေးခြိနျကို လြှော့ခပြေးနိုငျတယျ။
ရုံးပတသေီးမှာ ကယျလိုရီအလှနျနညျးပါးစှာ ပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ရုံးပတသေီး 100 g ဟာ ကယျလိုရီ33%ကို လောငျကြှမျးစနေိုငျစှမျးရှိလို့ မြားမြားစားလေ ဝိတျကဖြို့အတှကျ အခှငျ့အလနျး ပိုမြားလဖွေဈပါတယျ။
4. ကိုယျခံစှမျးအားကို မွငျ့မားစတေယျ။
ရုံးပတသေီး 100 g မှာ ဗီတာမငျ C 38% ပါဝငျလို့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အလှနျအရေးပါတဲ့ ကိုယျခံစှမျးအားကိုဖွဈစပေါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျ ကိုယျခံစှမျးအား နညျးရငျ နညျးသလို ပွငျပရောဂါတှေ ဝငျရောကျနိုငျဖို့ အခှငျ့အရေး ပိုကောငျးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရုံးပတသေီးကို နစေ့ဉျစားသငျ့ပါတယျ။
5. စိတျပိုငျးဆိုငျရာ စှမျးအားကိုလညျး မွှငျ့တငျပေးနိုငျတယျ။
နစေ့ဉျစားပေးရမယျ့ ရုံးပတသေီးမှာ Vitamin B9 ဓာတျ ကွှယျဝစှာပါဝငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဗီတာမငျ C လညျးပါဝငျလို့ စိတျဖိစီးမှုတှကေို လြှော့ခရြာမှာ အသုံးဝငျပါတယျ။ ရုံးပတသေီး ပုံမှနျစားသုံးပေးပါက စိတျခမျြးသာခွငျး၊ ကိုယျကနျြးမာခွငျးကို ဖွဈစပေါတယျ။
6. ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးမြားအတှကျ သငျ့တျောတယျ။
folic acid နဲ့ Vitamin B9 ဓာတျ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ ရုံးပတေးသီးကို ပုံမှနျစားသုံးပေးသငျ့သူတှထေဲမှာ ကိုယျဝနျဆောငျအမြိုးသမီးတှေ ဖွဈပါတယျ။ ရုံးပတသေီးဟာ ကလေး မှေးဖှားရ လှယျကူစပွေီး စှမျးအားအသဈတှကေို ဖွညျ့တငျးပေးပါတယျ။
7. ကငျဆာကို ကာကှယျပေးနိုငျတယျ။
ရုံးပတသေီးဟာ အခွားသဈသီးမြားထကျ ကငျဆာရောဂါကို တိုကျဖွတျနိုငျစှမျးရှိတဲ့ အမြှငျဓာတျနဲ့ အခွားဆေးဘကျဝငျ အာဟာရဓာတျတှေ ပါဝငျပါတယျ။ ဆဲလျပကျြဆီးမှုကို ထိနျးခြုပျပေးနိုငျပွီး၊ ခန်ဓာကိုယျထဲကို ဝငျရောကျလာတဲ့ ကငျဆာဆဲလျတှကေိုလညျး မဖွဈအောငျ တိုကျဖွတျပေးနိုငျပါတယျ။